ankamaroan’ireo tompon-trano. Anton’izany ny fisondrotry ny vidim-piainana raha araka ny fanazavan’ny tompon-trano iray. Eo ihany ny fiakaran’ny vidin’ireo kojakoja ilaina amin’ny fikarakarana trano raha misy fahapotehana toy ny tafo izay efa mila tsy ho taka-bola intsony ankehitriny, ny loko, ny famadihana ny varavarana ho lasa vy izay tena tsy maintsy hirosoan’ny tompon-trano rehetra amin’izao noho ny tsy fisian’ny fandriampahalemana…. Na izany aza anefa dia velon-taraina mafy kosa ireo mpanofa trano. Tsy misy mantsy na dia 1 Ar aza ny fampiakarana karama tamin’ity taona ity nefa ny fandaniana tsy mitsaha-mitombo. Eo an-daniny anefa dia sarotra ihany koa ny mitady trano mora amin’izao fotoam-pahavaratra izao indrindra fa ny eto an-drenivohitra. Marobe mantsy ireo traboina vokatry ny fiakaran’ny rano ka hifampitadiavana ny trano fonenana.
Legende : Mihalafo hatrany ny hofantrano eto an-drenivohitra amin’izao